Amathambo amnandi kumantombazana amnandi aseMerika naseRashiya
Julayi 3, 2018 Dianne Reeves Женщины
Abanye abantu bakholelwa ukuba itekisi enhle yindlela yobugcisa bokuzibonakalisa, isilwane okanye ubuhle nje. Abanye, ngakolunye uhlangothi, baxela ukuba umntu obeka tattoo akayihloneli kwaye uyangcolisa umzimba wakhe. Namhlanje ama-Tattoos sele adume kakhulu kwiMelika, bobabini phakathi kwamadoda amancinci, kunye phakathi kwamantombazana amnandi kwaye angenamantombazana amancinci.
Makhe sijonge ukuba kukho ukwahlukana kwiimbono phakathi kwabasetyhini abaselula: abanye bakholelwa ukuba bubuqhetseba, bubi, abanye - ngokwenene bubuhle kwaye buhle.
Umzekelo: татуировок с дорогого салона Голливуда.
Ingaba unomdla ukuba ufumane iziphumo zophando?
Kubathanda amathandabu, ngelishwa, ayikho iindaba ezilungileyo. Kwaye, umzekelo, ininzi yamadoda ithelekisa ityhini yomfazi kunye nomfazi osemncinane wokuziphatha okulula. Njengoko ibethwa kwaye igugile ayiyi kuvala, kodwa ukuthelekiswa okufanayo, mhlawumbi, ixesha elide liya kuba khona kwiintloko zabadlali abesilisa, kodwa inenhlanhla ngokuyininzi eRussia nakwiindawo eziphambili ezingaphantsi.
Phantse bonke abantu bakholelwa ukuba itekisi iyakwazi "kuvunyelwa", ngelixa ibhinqa liselula. Kwaye intombazana eneminyaka yobudala ye tattoo ibonakala ingenangqiqo kwaye ingabi yiminyaka. Ngokomzekelo, kukho le ngcamango, njengokuthi "tattoo ibhekane nayo." Oku kuthetha ukuba, inyaniso, ukuba umxholo kufuneka uhambelane nombonakalo, indlela kunye nokuziphatha kwentombazana.
U mzekelo amathambo angaphumelelanga.
Amadoda axininisa kwingxoxo yokuba itekisi igxininiswa ngokwesini kwintombazana. Umtsalane omhle kwaye ufanelekile ugubungela ingcamango yaloo mntu kwaye ibangele indumiso. Amanye amadoda ayesisiseko kwi-ecstasy, ukusuka kwimidwebo emikhulu emzimbeni we ntombazana, kwaye qwalasela ukuba lobu bugcisa. (Ngokwezifundo zethu, inani elikhulu lamadoda aselula avela kule qela ane1 okanye inani lamathambo).
I-2: Ixabiso kunye neNdawo inexabiso
Inani elikhulu lamakhwenkwe kumbuzo wokuba bathanda imifanekiso emantombazaneni, phendule: oku kuxhomekeke kumqulu kunye nendawo ye tattoo.
Kwaye umzekelo: xabiso: ngenxa yoko, ukuze ukhange umntu osemncinci, itottoo kufuneka ibe nemiqulu encinci. Ngokomzekelo, loo nto inyoka egubungela umlilo yomlenze wonke okanye umva, kunokuba nayiphi na enye imele ifakwe ngokukhawuleza.
iindawo ezizenzileyo zokusebenzisa iittoti, ingqungquthela yesilisa:
Abasimili bathi, ngokwenene, ukuba itekisi enkulu impela ayinangxaki kwaye i-unfeminine ibheka umzimba we ntombazana. Kuphi, ngaphezu kwe-2-uh "imidwebo" umntu oqhelekileyo, ngokwe-sampululwazi yethu yesampula, akayi kukwazi ukunyamezela.
I-3: ukungakhathaleli okungenammiselo
Kukho amadoda angakhathali ngamathambo kwintombazana, ngaba kukho umzobo wakhe kunye nantoni na kwaye njalo. Ababoni itekisi ityhilo, isambatho esinobugcisa, okanye isenzo sokuzibonakalisa. Yonke imibuzo iyaphendulwa: "kuxhomekeke kuyo kwaye kunye nobani." Ngokwemvelo, xa kwenzeka ukuba, lo tattoo kwindawo engaphumeleli, umzobo ungabangela ukugxekwa okubandakanya zabo.
Amadoda acinga ngamathambo?
Umnini we salisi yebhayisiki:
"Tatu amantombazana ndiyathanda. Umzimba wesibhobho wesibhakabhaka usindisa okufihlakeleyo, kunye neengqungquthela zokuqala. Le mifanekiso ilandelela malunga nentombi ephakamileyo ngaphezu kweengubo, ukwakheka, njalo njalo. AmaTattoos anentsingiselo kunye neendlela ezigqibeleleyo zokusebenza zinika umntu iimpawu zakhe. Mna, ndiphindaphinda, kum in tattoo yabesifazane, umxholo oyintloko uya kuba yi-sexy overtones. "
Ngamanye amaxesha izidalwa zamathambo zowesifazane zihle kwaye zifanelekile, kodwa ngamanye amaxesha azibalulekanga okanye, nangona kunjalo, zenziwe ngesandla esingenangqiqo. Andinayo impendulo ekulungeleyo kumbuzo abantu abacinga ngawo ngamathambo abesifazana, kuba naziphi na iimeko zodwa. "
Umzimba omuhle wendoda kunye nendalo ayifuni "imihlobiso engunaphakade." AmaTattoos kubasetyhini abancinci bangela ukuba ndiwuthathwe ngokukhawuleza kwaye ndingenakunqandwa. Andiyazi ukuba kutheni intombazana, kuba isicatshulwa esenziwa ebomini, kunye nexesha liba lusizi kwaye luchukumisa bonke ubomi. Umzimba omuhle wesifawu ungathandeki kum, kwaye tattoo ichitha yonke into. "
Kukho neengcinga ezininzi malunga namathambo omntu, kodwa siya kuhlanganisa le ngxaki kwezinye izinto.
Ubulumko kunazo zonke iimpendulo: xa umfana ethanda intombi yakhe, uya kuyithabatha kunye ne tattoo kwaye ngaphandle.
Emva koko, ukukhethwa kwamantombazana amahle anamathambo amahle kumzimba wonke.
Bona kwakhona indlela inkwenkwezi yombonkcoza ihlamba kunye nomnye umatshini.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-2,969, ukutyelelwa kwe-9 ngosuku)
Impembelelo yokubonakalisa, oko kukuthi, njani ukuqonda iingcamango neemvakalelo zabanye?
Izinto ze-8 ezona zenziwa ngcono ebusuku, kungekho ekuseni
Iinkwenkwezi zithanda ubugcisa! Ukutyelela okhethekileyo kwi-Fashion House Cliff
"Ukuba ndibe nguyise wentombi yam, ndamxelela ukuba ndimthanda." - amabali achukumisayo ngobudlelwane bukayise kunye ...
U-Gymnast owaphukileyo u-Rachel McCord ogwini lwaseSan Francisco
I-Contrast Effect idibanisa njani ebomini?
Ifreyimu ebomini ebomini: abantwana badinga thina, kuphela emva kwexesha
Post Previous:Jordin Jones kwi-yellow njini share share photo ye-Instagram
Okulandelayo Post:USara-Jane Crawford kwi-White Bikini kunye noJoe Joyce elunxwemeni e-Ibiza